Anyị niile ụtọ owning a Micro SD kaadị maka ojiji na anyị ntị, ese foto n'etiti ndị ọzọ ma ihe atụgharị utoojoo mgbe ọ bụla na chọsiri ike inweta Micro SD Nwela mebiri emebi. Nso ibuana? Na ị hapụ na mmasị foto, ihe dị mkpa akwụkwọ ma ọ bụ ihe ọ bụla ị mkpa n'ezie. Ihe ọ dịghị onye hụrụ adịkwa ihe na ihe mere na ohere ọ bụla FA mebiri emebi Micro SD ga-anwale gị akwara. Ya mere, ihe ndị na-akpata nke a rụrụ arụ Micro SD?
Akpata Micro SD Nrụrụ Aka
Ure nke Micro SD kaadị nwere ike ime site ogbenye njikwa mgbe ndị ọzọ nwere ike ịbụ si n'aka gị. Wepụ kaadị mgbe ọ ka na-eji bụ otu ihe kaadị gị nwere ike inwe rụrụ arụ. Ka ihe atụ, ọ bụrụ na ị na-eji ya na a igwefoto na ị na-ekwesịghị ekwesị idaputa ya. Mberede formatting nwekwara ike ịkpata ire ure nke Micro SD kaadị. Ụfọdụ ndị na-aka gị nwere ike ịgụnye kọmputa virus agha na n'ichepụta ntụpọ na-enweta site na akpachapụghị anya imewe na gbakọta na ụlọ ọrụ mmepụta ihe ọgwụgwụ.
Naghachi Data si a rụrụ arụ Micro SD kaadị eji Wondershare Data Recovery Ngwá Ọrụ
Ugbu a, na i furu efu gị faịlụ site Micro SD nrụrụ aka, ọ dịghị mkpa na-eti mkpu n'elu gbawara n'etiti mmiri ara ehi. Mgbe niile e nwere ihe ngwọta na ga-ị azụ ụkwụ gị. Azịza ya bụ a software mgbake ngwá ọrụ a maara dị ka Wondershare data mgbake software. Nke a bụ ihe nile na otu ngwá ọrụ e mere iji naghachi furu efu data si faịlụ nchekwa ngwaọrụ ebe àjà ị ezi ọrụ ahụmahụ. Site ọrụ ahụmahụ ndị software nnoo-enyere gị aka ime ka kwesịrị ekwesị mkpebi na mfe iso nzọụkwụ. Ka na-anya na otú ị pụrụ agbake faịlụ site na iji na Wondershare Data Recovery Software.
Nzọụkwụ 1: Download, Wụnye na ẹkedori Software
Nke a bụ software mere maka Mac na Windows ọrụ otú ọ bụrụ na ị na-agba a Linux PC, Ohere inweta bụ na ị ga-mkpa multi buut na-enweta software. Gaa ukara download site- http://www.wondershare.com/data-recovery-mac/ na họrọ n'elu ikpo okwu ị na-agba na download.
The ebudatara software bụ a ikpe mbipute ma i nwere ike inwe zuru version nke kacha atụmatụ . Ozugbo arụnyere, ẹkedori software na ị bụ ezi na-amalite. Hụ na ị na efego Micro SD kaadị iji a ekwentị na USB, kaadị ebe nchekwa na-agụ ma ọ bụ ihe ọ bụla nhọrọ adabara gị.
Nzọụkwụ 2: Họrọ Iweghachite ọnọdụ na ike iṅomi
Nzọụkwụ nke abụọ bụ iji họrọ mgbake nhọrọ na-na-na-ahọpụta Lost File Iweghachite na ị ga-gaba na-ahọpụta ndị ụzọ ebe Micro SD kaadị na-emi odude na pịa iṅomi nhọrọ. Ka software Doppler site na gị faịlụ dị ka ị na-eche
Nzọụkwụ 3: Preview Discoverable Files na-agbake
The ikpeazụ nzọụkwụ bụ iji họrọ faịlụ na ị chọrọ iji naghachi. Na ikpe na ị ga-achọ naghachi niile mgbe ahụ i kwesịrị ego igbe coinciding niile faịlụ. A green button ọzọ na igbe na-egosi na faịlụ dị mma maka mgbake.
Onye ọrụ interface-enye gị ohere ịhụchalụ faịlụ tupu ị họrọ nke bụ ihe dị mma karịsịa maka ọdịyo na video faịlụ. Pịa na Naghachi ozugbo ị na-ahọrọ ndị gị mkpa. Mfe dị ka ndị ị na-weghachi faịlụ site na a rụrụ arụ Micro SD.
Olee otú ịrụzi a mebiri emebi Micro SD kaadị
Ka anyị sapee uche anyị na otú i nwere ike ịrụzi a mebiri emebi Micro SD kaadị. Ịrụzi a mebiri emebi Micro SD kaadị ị ga-mkpa iji ngwá ọrụ a maara dị ka SD formatter- i nwere ike ibudata ya na https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/index.html. Cheta ịhọrọ OS ị na-agba tupu ị nwere ike ibudata ya dị ka mma. Ozugbo ị ibudatara na arụnyere ị ga-ahụ ndị na-esonụ interface
Nzọụkwụ 1: Wụnye Software na ugwu gị SD Kaadị
Mbụ i kwesịrị ibido bụ wụnye software na gị Mac ma ọ bụ windows kọmputa. Ị nwere ike ibudata ya na http://www.wondershare.com/data-recovery na wụnye ya. Ẹkedori gị ngwa site na mmalite menu na PC ma ọ bụ site ngwa ngalaba na Mac.
Pịa na Drive iji họrọ mbanye nke Micro SD kaadị na-ịchọrọ ị Ọkpụkpọ na ndozi. Pịa na Format na ndị na-esonụ window ga-apụta.
Na Usoro Ụdị, họrọ Ngwa, Full (ihichapu) ma ọ bụ zuru (overwrite). Gbaa mbọ hụ na na Usoro Size ukpụhọde na-Gbanyụọ mgbe ahụ Pịa na OK.
Ozugbo ị na-mere, e nwere ụfọdụ ole na ole Atụmatụ unu ga-edebe abreast iji belata Ohere nke Micro SD kaadị na nrụrụ aka na mmebi.
Gbaa mbọ hụ na ị na-kaadị gị ọma nke mere na ị adịghị ehulata ya
Adịghị ekpughe na kaadị na oké okpomọkụ
Ọkpụkpọ na kaadị kwesịrị ekwesị software kama na OS ngwaọrụ
Zere ejecting ya mgbe Iji-n'enweghị wepụ ya mgbe niile
Adịghị eji Micro SD on nza nke ngwaọrụ
Na-ya n'ebe virus oria ngwaọrụ
> Resource> Kaadị ebe nchekwa> Olee naghachi data na ndozi mebiri emebi Micro SD kaadị